WASIIR MAAREEYE IYO SAXAAFADA XORTA AH - Latest News Updates
WASIIR MAAREEYE IYO SAXAAFADA XORTA AH
Wixii badawnimo ah iyo aqoon daro waa gaar,hayeeshee waxaynu wada ogsoonahay macnaha saxaafada dal leeyahay. Saxaafadu waxay leedahay aqoon u gaara oo kasoo bilaabata tacliinta dugsiga sare marka qofku suxufinoqonaayo. waxaana jira dunida dugsiyo sare oo lagu barto saxaafada kadibna looga sii gudbo jaamacada culuunta saxaafada lagu barto. markaa waa kuliyad dhan oo lamid ah kuliyadaha laamaha kale ee cilmiga.
Qofka noqonaaya suxufi waxaa waajib ah oo laga rabaa in uu soomaro dariiqeedii oo ah in uu leeyahay aqoon saxaafadeed heerkasta haka joogee.maha uun kaamaro laduubo iyo sawiro la qaado waa ka qodo dheertahay intaas.wariye nimadu waa xirfad aqoon lagu gaaro oo waqti qaadata dheer.hadaan intaa uuga haro qofka noqon kara wariye iyo wixii looga baahnaa.
Waxaa dalwaliba leeyahay wasaarad iyo wakaalad xakamaysa oo koontaroosha dhaqdhaqaaqa iyo tabinta warka dalka oo ah mid gudaha ah iyo mid dibdaba ah. Hadaba labadaa war dal waliba wuxuu leeyahay siyaasad iyo xeer u dagsan oo saxaafadu raacdo,mana jirto saxaafad xor ah sida ay dadka qaar u qaateen oo ka jirta dunida. Saxaafad xor ka ah dalka ay ka hawlgalayso,oo dalkaa arimihiisa gudaha iyo dibada ka baahisa wax allaale iyo waxay doonaan,oo aan lahayn tifo tire qaran iyo wakaalad hubisa warka kama jirto dunida.
Haday jirtana waxaa dhacaysa sida ka dhacday MOGDISHO oo idaacad laga siidaayay in raysalwasaarihii qaranka is casilay kadib markii madaxweynuhu ka qaaday xilkaas. arintaas waxay ka hor imanaysaa labaahiyay jiritaanka dawladnimada soomaaliyeed waana danbi weyn oo dil ah,ama xabsi dheer. warka dalka wasaarad buuleeyahay iyo wakaalado la aantoodna lama faafin karo war aysan ogolaan.dawlad walbaana waasidaa.
Saxaafada maraykanku masii dayso war dalka gudihiisa ah ama dibadiisa ah oo aysan wakaaladi iyo tafa tire qaran hubin,dalalka kalana warkoodaba iska daa. Saxaafada waxay kashaqaysaa danta dalkeeda iyo wixii hormarkooda iyo amaankooda waxtarka u leh,waxayna ku shaqaysaa danta dadka iyo dalka,waxayna difaacdaa danaha iyo maslaxada dawladooda iyo dalkooda.
QAABABKA DAL LOO BURBURIYO QAYBTA UUGU WAYN WAXAA KAMID AH SAXAAFADA OO CADAWGU QABSADO
Dalkeenu kolkuu burburay ee maqnaansho dawladeed dhacay,xasaafadiina waxaa qabsaday cadawgii soomaaliyeed wakiiladii uu inagu dhex abuurtay,mudadaas dheer saxaafada dalkeenu ma ahayn mid sharciyaysan mana aha mid u adeegta danaha qaranka soomaaliyeed,waxayna dalkeena ku hogaamisay wado qaldan iyo u adeegid shisheeye.
Aad ugu fiirsada kol hadaynu niri saxaafadu waxay leedahay tafa tire iyo wakaalad ay hoos timaado,kol hadaynu niri saxaafadu waxay u adeegtaa danaha dalkeeda,waxaa is waydiin leh saaxaafadan jaantaa rogan ah oo tirada badan yay u adeegaan? yaa mu shahar siiya? yay qancinayaan oo warka u tabaniyaan oo warkaa ka faa iidaya oo dirsaday iyaga? Mawaxaa jira nin qalab warbaahin oo qaali ah haysta,oo dad shaqaaleeyay,oo intaa meel kasta war doonimo u galaaya oo intaas oo dhan u qabanaaya si bilaash ah oo cid wax kusiisa iyo cid uu u adeegayaaba ma jirto masidan ayaan ku qanacnaa?
Maya weeye,xagee ka socdaa suxufiga soomaaliyeed ee dalkeena ku sugan,yuuse u adeegayaa? Waxaan xasuustay dalka RUWANDA madaxweyne Paul Kagame markuu dalkiisa oo qabiil qabiil isu xasuuqay oo dalkiiba dhulka lala siimay uu dib u yagleelaayay,waxa uu sameeyay laba qodob oo kaliya ugu horayn.
1.Saxaafadii shisheeyuhu qabsaday, isagaa lawareegay dalkana kasifeeyay kuwii u adeegaayay shisheeyaha, nin walbana waxa uu waydiiyay oo kaliya wariye walba hal su aal uun oo isku mid ah, Dalka Runwanda kuma dirsan adiga in aad warka u tabiso umana shaqaysid lacagna kuma siiyo hadaba Adeer yaad ushaqaysaa? wax cararay iyo wax kabaxay jaajusnimadii ayay noqdeen iyo qaar yaroo go aan saday intay runta u sheegeen in ay hada kadib dalkooda u shaqaynayaan sharcigana raacayaan dalka.
2.Ciidamada qaranka oo uu dhisay sida uu dhisayna waa isagaa ku qoray gacantiisa ciidamada. kadibna wuu guulaystay dalkiisiina cadawgii gudaha wuu ka adkaaday maantana waa dalalka uugu hormarsan afrikada madoow. cid uu kayeelay majirto ciidamada qabiilkayga qor iyo ha qorin, qabiilkee u badan iyo keebaa kuyar midna,waxa uu qoraayay qofkastoo ruwandees ah wadani ah una qalma shaqadaas. wax kale oo dhan dhag uma dhigin.
Horaan u sheegnay in shabakad maafiya ah oo isku xiran dalkeena haysato gaar ahaan MOGDISHO,iyagoo uuga faa iidaysanaaya magaalada oo ah caasimad ilaa hada dadka soomaaliyeed isku raacsan yahay. waxay ka kooban yihiin sidaynu sheegnay horeba sidan hoos ku qoran.
1.Siyaasiyiin kuwo ku gabada oo iska dhiga mucaarad oo ay horbaadayaan madaxeynihii hore xasan sheekh,fiqi,iyo kuwan daba socda oo la dhumiyay waa odawaa iyo mahad salaad iyo cabdishakuur,dadka qaarbaa u yaqaan siyaasiyiinta xanaaqsan.
2.Ganaacsato suuqa bakaaraha fadhida oo ku qariya lacagaha shabaabku hawlgalaan,lacagaha siyaasiyiinta xanaaqsan iyo lacagaha loogu tala galay in dalkeena lagu burburiyo, waxayna dumiyaan suuq kasta oo MOGDISHO ka furma,si ay lacagaha dibada ka yimaada ee cadawgu soo galiyo dalkeena uuga dhigaan lacag ku timid ganaacsi suuqana laga dhigo suuq shaqo ka socoto oo camiran. ganaacsatada bakaaraha iyaga xabadu makarto sida siyaasiyiinta xanaaqsan cidina ayaga utaaban oo kale!! masaakiinta unbaa lagu dilaa iyaga unbaana dila
3. Ciidamada lahawl galiyo oo kala ah kuwo ciidanka xooga dhex jiifa oo isdiiwan galintii iska diiday saad ogtihiin qoladan afka waa ufuran yahay, iyo wajiga kale oo ah afka oo laduubto magucuna yahay shabaab! kuwan waxay ka amar qaataan siyaasiyiinta xanaaqsan iyo ganaacsatada suuqa bakaaraha.
4.Dawlado iyo shirkado cadaw ah soomaaliyeed sida e-maraatka oo bixiya dhaqaalaha hawshaan lagu fuliyo si dalkeenu u helin dawladnimo iyo xasilooni. Hadaba shabakada isku xiran ee hortaagan dawlad in dalkeena ay ka dhalato,dadkana ku laaya Mogdisho waa sidaa.
Wasiir Cabdi xayir maareeye intaynu ka naqaan waa nin hawlkar ah shaqo badan,waa nin u adeegaaya danaha dalkiisa iyo dadkiisa oo jecel kuna soo barbaaray sharaf iyo dawladnimo.waa nin garankara masuuliyada warbaahinta soomaaliyeed iyo shaqadeedu waxay tahay. waan ku kalsoonahay in uu kasoo dhalaalidoono wasaaradiisa iyo shaqada qaranka soomaaliyeed ka sugaayo sibuuxda. waa u hanbalyaynaynaa xilkaa loomagacaabay illaahayna waxaan uga baryaynaa in uu ufududeeyo shaqadiisaa loo igmaday. hada kahor waxaan dareemaynay sidii iyada oo dalkeenu uusan lahaynba wasiir iyo wasaarad warfaa fin,waana u cadahay shacabka soomaaliyeed ninkii meesha baneeyay in uu hag raday dalkiisa!! maxaase ka xun nin dalkiisa hagraday oo hagardaameeyay??? Nin walba waxa uu u dhimay dalkiisa iyo waxa uu taray waa mid u galaysa diiwanka soomaaliyeed oo isaga iyo ubadkiisa u ah dhaxal kolkaa nin walbaa waa halkuu is dhigaa.
Adeer ninka nabad iyo nolol inoo diidan iyo in aan noqono umad jirta oo dawlad ah waa waajib in aan ku ruuxbaxnaa suuro galna maha in aan wada noolaano cadawgaas. ninbaa leh wariyaan ahay dalkaagii buu jaajuusayaa waana daawanayaa sababtoo ah waa reer hebal adeer waxaasi shaqayn mayso hacadeeyo ciduu u adeegayo kadibna ha lasugo. waxaan illaahay ka baryayaa in uu dalkeena ka dhigo mid nabdoon soomaali oo dhamina gacmaha is qabsato, kuna noolaadaan nabad iyo nolol wanaagsan oo dagan oo xasiloon. qaranimo iyo dawlad nimo ayaan rabnaa soomaalinimo ayaan rabnaa dalka aan u dhimano waxaan hubaa in aan guulaysanayno.
waxaa xasuus mudan sidoo kale dalkii USSR ee rashiya in 1991 la burburiyay dawladiisii kadibna ay qabsatay saxaafada xorta ah!! wiil wadani ah oo layiraahdo Putin ayaa u kacay dalkaas oo gacan ku dhigay bir ah saxaafadii xorta ahayd! isagoo dalkii ku soo dabaalay saxaafad u adeegta danta dalka iyo dadka raashiya oo ku shaqaysa xeerka saxaafada dalkooda u dagsan, halka saxaafadii xorta ahayd u kala firdhadeen dalalkii ay u adeegayeen oo wakiilka u ahaayeen.
Mudane wasiir xayir, maanka ku hayso wanaaga aad diintaada iyo dadkaaga iyo dalkaaga aad larabto waxaa diidan oo hor istaagaya dad,kolkaa xaqa iyo baadilkuna waa col marwalba,waxaadse ku calool samaataa goorta xaqa yimaado baadilku waa baxaa. Mudane wasiir dalkeenii inagoo nool ayaa rag warbeen ah iyo qabyaalad iyo iska horkeen ku jahawareeriyeen iyagoo u adeegaya shisheeye iyo kuwo dawlad diid ah iskana dhigaaya wariyayaal!!
Ninkastoo aduunyada guulaystay waxa uu jiiray caqabado badan iyo jilaafooyin loo dhigay nina dawladnimada iyo gobonimada sharafka iyo dalnimada kama helo daleedada dhib yaraan. Adigoo taa ka duulaya isku xir rabbigaa oo talo saaro, ragnimo waa kugu ogtahay soomaali intaa dabadeed waxaan hubaa in aad guulaysanayso, hadaad guulaysatana macnaheedu waa soomaaliya oo guulaysatay. dalkeenu meelaha uu baylahda kayahay waxaa kamid ah saaxafada halkaasoo nacabku inooga soo dhacay, ishaan arkase soo afjarmaysa.
MARKHAATI CAD CADAWGA LAYNAGA DHEX SAMAYSTAY
Mudo aad u dheer ayaan madaxda iyo shacabka dalkeena usoo bandhigaayay, khidadaha shisheeye iyo dadka uu inaga dhaxsamaystay burburkii dawladnimadeena 1991 dii wixii ka danbeeyay. si laynoogu diido in aan noqono dawlad xor ah oo dhulkeeda maamulata. dalkeena waxaa laga abuuray saan hore u sheegay shabakad maafiyada caalamiga ah,oo uu horboodaayo madaxweyne hore xasan sheekh iyo fiqi oo ay waheliyaan ganaacsato kusheega suuqa bakaaraha iyo shabaabka oo afkaduubta oo isku ah shabakada maafiyada caalamiga ah.waxaana hoostaga saxaafada xorta ah oo halmeel looga taliyo hadafkuna waa in ay helaan doolar oo kaliya. Soomaaliyana u diidan in dawlad shaqaysaa ka dhalato.
Halkan kadaawo aqoonyahano heer caalami ah oo qeexaya shantaan hore u sheegay ee ah qaabka dal looburburiyo loona kala diro dawladnimadiisa si cadawgu ugaaro danihiisa guracan.hada waxaa inaga khuseeya qodobka maqaalkan oo ah saxaafada ka xorta ah dawlada soomaaliyeed ee dalkeena ka shaqaynaysa,oo ah hadaysan ka tirsanayn wasaarada warfaafinta oo aysan ka diiwan gashanaynba dalkeena yaa dirsaday oo ay u shaqeeyaan? saxaafadu waa cadaw lagu burburinaayo dawladnimada soomaaliyeed. Ciidamada nabad sugida soomaaliyeed ayaa laga rabaa dadka abaabula mudaharaadyada, dadka saxaafada kadanbeeya iyo kuwa fuliya,dadka shirarka qabta qaranka soomaaliyeed lagu halaagayo in ay daba galaan oo sugaan.